Naadiga reer England ee Manchester City oo iibsatay Koox ka dhisan Waddanka Belgium-ka – Gool FM
Naadiga reer England ee Manchester City oo iibsatay Koox ka dhisan Waddanka Belgium-ka
(Manchester) 12 Maajo 2020. Kooxda Manchester City ayaa la soo sheegayaa inay yeelatay koox kale oo ay ku mideysan yihiin mulkiyadda, kaddib markii ay dhammaystireen inay iibsadaan naadi ka dhisan Waddanka Belgium-ka.
Kooxda ka ciyaarta Waqooyi-Galbeed ee dalka Belgium ee Lommel SK gaar ahaan meel ku dhow soohdinta Waddanka Holland ayaa waxaa iibsatay shirkadda City Football Group ee iska leh Manchester City oo uu leeyahay Sheikh Mansour.
Kooxdan yar ee Lommel SK ayaa waxa ay kaalinta lixaad kaga jirtay kala sarreynta horyaalka dalka Belgium ka ciyaareedkan ka hor inta aan la kansalin sababo la xiriira Coronavirus.
Waxa ay noqonaysaa Lommel SK kooxdii sagaalaad eek u soo biirta kooxaha CFG oo uu iska leeyahay Sheikh Mansour, kaddib markii uu ka bixiyey lacago dhan £1.75 milyan oo deyn ah oo qayb ka noqonaysa heshiiska uu kula wareegay.
“Maalgelinta CFG ee ay Adduunka ka samaynayso way sii kordhaysaa, waxaanay diiradda saaraysaa inay horumariso kooxaha, kulliyadaha iyo ciyaartoyda.” Ayuu u dhignaa bayaan ka soo baxay shirkadda CFG (City Football Group).
“Kooxaha xiriirka ah ee CFG waxa kusoo biirtay Lommel oo ka faa’iidaysan doonto cilmi-wadaagga iyo khibradda kooxahan dhexdooda.”
Shirkadda CFG ayaa waxa ay hore u lahayd kooxaha Manchester City oo Ingiriiska ah, New York City oo Maraykanka ka dhisan, Melbourne FC oo Australia ah, Yokohama F Marinos oo Japan ka dhisan, Montevideo City oo Uruguay ah, Girona FC oo Spain ka ciyaarta, Sichuan Jiuniu oo Shiinaha ah iyo Mumbai City FC oo India ka dhisan.
Giggs oo shaaca ka qaaday sababta dhabta aheyd ee ka dambeysay in Beckham uu ka tago Man United